विद्युतीय सवारी निर्माणको केन्द्र बन्ने होडमा भारत :: Setopati
एजेन्सी भारत, कात्तिक ३
भारतका लघु तथा मझौला उद्यममन्त्री नितिन गड्करी 'स्वदेशी' उत्पादन बढाउने प्रयासमा लागि परेका छन्। उनका अनुसार भारतको अटोमोबाइल क्षेत्र तुलनात्मक रुपमा आत्मनिर्भर भइरहेको छ। उक्त टिप्पणी उनले आइतबार स्वदेशी जागरण मञ्चद्वारा आयोजित एक भर्चुअल कार्यक्रममा दिएका हुन्।
मन्त्री गड्करीले आयातमा निर्भरता घटाउनु पर्ने र निर्यात बढाउनु पर्ने आवश्यकतालाई जोड दिँदै भारत ठिक ढंगले अघि बढिरहेको बताए।
'मेरो विचारमा आयात पूर्ण बन्द गर्नु जरुरी छ र निर्यात बढाउनुपर्छ,' केन्द्रीय मन्त्रीले दिएको टिप्पणीलाई भारतीय अखबार हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ, 'अनि ग्रामिण सहभागितालाई जोड दिए ५ करोड भारूको वैकल्पिक इन्धन अर्थव्यवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ।'
कार्यक्रममा गड्करीले भारतबाट निर्माण भइरहेका विद्युतीय सवारी साधनले भविष्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। उनका अनुसार आगामी ५ वर्षमा भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो ई‍-साधन निर्माण केन्द्र बन्नेछ। र, यसले दुई पाङ्ग्रे, तीन-पाङ्ग्रे र कारदेखि निर्माण उपकरणसम्मका सम्पूर्ण सामग्री उत्पादन गर्नेछ।
भारतले विद्युतीय सवारीसाधन ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न खोजिरहेको छ भने केही समयअघि भारतीय सरकारले सन् २०३० सम्ममा देशलाई सत् प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन राष्ट्र बनाउने महत्वाकांक्षा प्रकट गरेको थियो।
तर यसका लागि पूर्वाधार विकासको गति कायम राख्नुपर्ने हुन्छ र स्थानीय उत्पादनलाईसमेत थप जोड दिनुपर्ने हुन्छ।
गड्करीले यस अघि पनि कार निर्माताहरुलाई वैकल्पिक इन्धन प्रवर्द्धन गर्न फ्लेक्स इन्जिन निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक ३, २०७७, ०५:१७:००
‘बुमर’ शब्द प्रयोग गरेकोमा बिएमडब्लुले माग्यो माफि
भेष्पा वा अप्रिलिया स्कुटर किन्दै हुनुहुन्छ ? यस्तो छ मूल्य
किया सोनेट नेपाली बजारमा, यस्तो छ मूल्य र विशेषता
रोयल इन्फिल्ड मोटरसाइकल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? यस्तो छ मूल्य